अाज यि राशी हुनेले केहि गर्नु पुर्व निकै बिचार गर्नुहोला ! थाहा पाउनुहोस् आफ्नो बुधबारको भाग्य – Online Khabar 24
अाज यि राशी हुनेले केहि गर्नु पुर्व निकै बिचार गर्नुहोला ! थाहा पाउनुहोस् आफ्नो बुधबारको भाग्य
दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रता समेत सुमधुर हुनेछ । लगानी गर्दा व्यवसायमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ ।
आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ । पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन् ।
Prevको’रोनालाई सामान्य ठान्दा गयो ज्यान !
nextजब आफ्नो छोराको नि’धन हुने बित्तिकै मुटु प्रत्यारोपण गरि बाँचेका युवक ति आमालाई भेटन् जादा…